डब्लुएचओद्वारा मास्क लगाउनेबारे दिशानिर्देश जारी, कहिले र कहाँ लगाउने ? - डब्लुएचओद्वारा मास्क लगाउनेबारे दिशानिर्देश जारी, कहिले र कहाँ लगाउने ? -
डब्लुएचओद्वारा मास्क लगाउनेबारे दिशानिर्देश जारी, कहिले र कहाँ लगाउने ?
उज्यालो प्रतिनिधि २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार फोटो समाचार
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावट रोक्नको लागि सामाजिक दूरी र अनुहारको मास्क लगाउने सिफारिश गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मास्क लगाउनेबारे दिशानिर्देश जारी गरेको छ। डब्ल्यूएचओका अनुसार मास्क ती ठाँउमा लगाउनु पर्छ जहाँ सामाजिक दूरी पछ्याउन सकिदैन। यस दिशानिर्देशमा, डब्ल्यूएचओले भनेको छ कि कुन परिस्थितिमा फेस मास्क लगाउनु पर्छ, कुन मास्क लगाउनु पर्दैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मास्कको गुणस्तर सम्बन्धी निर्देशन पनि दिएको छ। नयाँ अनुसन्धानका अनुसार अनुहार मास्क बजारबाट पनि किन्न सकिन्छ र घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। घरमा कपडा-तयार मास्कहरूको तीन तह हुनुपर्छ। यो उत्तम छ यदि त्यहाँ कपासको अस्तर, पोलिएस्टर को बाहिरी तह र बीचमा पोलिप्रोपाईलिनबाट बनेको ‘फिल्टर’ तह।
दिशानिर्देशमा भनिएको छ कि भीडभाड ठाँउहरूमा मास्क लगाउन मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । समुदाय प्रसारको लागि सम्भावित स्थानहरू जस्तै बस स्ट्यान्डहरू, अस्पतालहरू, र अन्य भीडहरूको लागि मास्क लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
डब्ल्यूएचओका महानिदेशक डाक्टर टेड्रोस एडेनमले भनेका छन् कि अनुहारको मास्कमा धेरै भर पर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनी भन्छन् कि अनुहारको मास्क रोगलाई हराउन व्यापक रणनीतिको एक हिस्सा हो र यसका साथै अन्य सावधानीहरू पनि आवश्यक छ।
एडेनोमले चेतावनी दिए कि केवल मास्कको प्रयोगले कोविड १९ लाई बचाउन सक्दैन। कोरोनाबाट बच्न शारीरिक दूरी सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसका साथै हातहरू सफा राख्न र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अन्य उपायहरू पनि आवश्यक छन्।